ADX Tusiyaha Ama Istaraatiijiyada Tilmaamaha Dhexdhexaadka ah | vfxAlert official blog
ADX tilmaame: wax walba oo loogu talagalay ikhtiyaarrada is-dejinta ganacsiga
Dhibaatada go'aaminta xilliga bilowga iyo, taas ka sii muhiimsan, dhammaadka isbeddelka ayaa inta badan jahwareer ku ah kaliya kuwa bilowga ah, laakiin sidoo kale ganacsatada xirfadleyda ah. Taasna waa in la sameeyaa, maxaa yeelay ganacsiga jihada dhaqdhaqaaqa weyn wuxuu had iyo jeer noqon doonaa istiraatiijiyadda ugu faa'iidada badan. Si loo xalliyo dhibaatada, la soo saaray qalab farsamo oo badan oo ka mid ah kuwa ugu adag uguna badan ee loo isticmaalo ganacsatada binary waa tilmaame ADX ama "Istaraatiijiyadda Tilmaamaha Dhexdhexaad".
Sharaxaadda istaraatiijiyaddan ganacsi ee ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ayaa markii ugu horreysay lagu arkay buugga "Fikradda cusub ee nidaamka ganacsiga farsamada" ganacsadaha caanka ah ee Mareykanka ah J. Wells Wilder, oo abuuray RSI iyo Parabolic SAR, oo caan ku ah dhammaan hantida ganacsiga iyo suuqyada.
Xisaabinta iyo dejinta tilmaame
Habka waxaa ku jira laba tilmaame:
Jihada isbeddelka qiimaha (DMI, Tilmaamaha Dhaqdhaqaaqa Jihada), kaas oo go'aamiya jihada isbeddelka iyo dhibcaha dib u noqoshada suurtagalka ah;
Qiyaasta Tilmaamaha Qiimaha ADX (Isugeynta Tilmaanta Dhaqdhaqaaqa Tooska ah) oo muujineysa xoogga iyo dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa qiimaha.
Jaantus ahaan ADX ayaa lagu soo bandhigaa saddex shax oo daaqad gaar ah:
Khadadka + DI wuxuu muujinayaa jihada wanaagsan (kordhinta) qiimaha;
Taban (hoos u dhacaya) -DII.
ADX waxaa loo xisaabiyaa inay tahay saamiga farqiga ama wadarta + DI / -DI qiimaha muddooyinka la cayimay. Marka, joogitaanka isbeddel iyo firfircoonidiisa ayaa la go'aamiyaa.
Xisaabinta tusaha . Algorithm waa mid aad u adag oo ay ku jiraan talaabooyinka sida go'aaminta kala duwanaanta dhabta ah (TR, True Range) oo isbarbar dhiga qiimaha isbadalka +/- DI. Kuwa xiiseynaya waxay si fudud uga heli doonaan sharaxaad faahfaahsan oo ku saabsan xisaabinta internetka, halkaana waxaan ku soo jiidaneynaa akhristaha feejignaanta joogitaanka natiijooyinka iyadoo la adeegsanayo Celceliska Dhaqdhaqaaqa Jaban (EMA). Celceliska Dhaqdhaqaaqa waa inuu ahaadaa dhammaan calaamadaha ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah!
Marka la eego, muddada waxaa loo dejiyey 14 shumac (baararka), oo si fiican uga shaqeeya inta badan hantida iyo waqtiga laga bilaabo H1 iyo wixii ka sareeya. Dejintu way is beddeli kartaa iyadoo kuxiran suuqa hadda jira, tusaale ahaan, caanka ah 12.18 iyo 21-muddada ADX.
Waxaa lagugula talinayaa inaadan dhaafin inta udhaxeysa 7-30 caadadood. Sida had iyo jeer ah, muddooyinka yar, dhibcaha gelitaanka badan ee laga yaabo inay jiraan calaamado laba-geesood ah oo bilaash ah oo been abuur ah, kororka xad-dhaafka ahi wuxuu horseedaa ka-boodidda qayb wanaagsan oo ka mid ah isbeddelka, halkaas oo ay jiri karaan fursado dhowr ah oo faa'iido leh .
Intaa waxaa sii dheer, waad beddeli kartaa nooca qiimaha loo isticmaalay xisaabinta, laakiin sida dhaqanku muujiyey, waxaa fiican in la Xidho .
ADX istiraatiijiyad ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah
Sida laga soo xigtay qoraaga, calaamadaha furitaanka meheradaha waa sahlan yihiin: haddii + DI ay ka sarreeyaan-DI oo ADX ay xaqiijiso kororka qiimaha, soo noqoshada, waa inaad furtaa CALL-option. Iyadoo la raacayo, xaaladaha ka soo horjeeda, suuqa ayaa hoos u dhacaya waxaadna u baahan tahay inaad raadsato fursado kaliya PUT-xulashooyinka. Dhinac ama hoos u dhaca ADX, ma jiro wax dhaq dhaqaaq jihooyin ah, waana ka harnaa suuqa. Eeg tusaalooyinka calaamadaha:
Intaa waxaa sii dheer, awoodda isbeddelka waxaa lagu go'aamin karaa iyadoo la adeegsanayo qiyamka ADX ee saxda ah. Haddii ay hoos u dhacdo, ka hooseyso heerka 20, isbeddelku wuu daciif yahay, haddii uu ka sarreeyo ama ku dhow yahay 40, dhaqdhaqaaqa ayaa laga yaabaa inuu sii socdo. Halkan waxaad ku sawiri kartaa isbarbardhigyo oscillators xad dhaaf ah / xad dhaaf ah - codsigoodu wuu ka duwan yahay, laakiin guud ahaan, qodobbada udubdhexaadka ah ayaa si sax ah loo go'aamiyaa.
Markaad goyneyso, waa inaad sugto shumaca hadda jira inuu xirmo, khaasatan haddii uu jiro heer sicir taban oo u dhow: taageero / iska caabin, Fibonacci, Pivot, iwm. Dib u soo kabasho ayaa suurtagal ah, ka dibna calaamadda ADX waa la joojiyaa. Waxaan u dhignay dhicitaanka ugu yaraan 2-3 shumacyo waqtiga shaqada, H1 waxaan ku kordhineynaa muddada 5-7 baararka. Ganacsatada Forex waxay adeegsan karaan nooc tilmaame ah oo leh digniin, oo ku saabsan meheradda ganacsiga binary wax walba gacanta ayaa lagu xakameeyaa.
Had iyo jeer xusuusnow sida istiraatiijiyad kasta oo ganacsi u shaqeyn karto, oo ah: ma furi kartid heshiis adoo adeegsanaya hal tilmaame oo keliya, waxaan raadineynaa xaqiijin dheeri ah. Intaas waxaa sii dheer, uma baahnid in badan oo iyaga ka mid ah, kaliya 1-2 laba khadadka isbeddelka, oscillators ama xitaa khadadka fudud ee isbeddelka ah sida muuqaalka la muujiyay.
Kaladuwanaanshaha (kaladuwanaanta) dhaqdhaqaaqa shaxda qiimaha iyo khadadka DI-da ayaa si xilliyo ah u dhaca. Tusaale ahaan, waxaa jira ugu badnaan maxalli ah jaantuska, waana ka yar yahay kii hore ee + DI. Sida loo isticmaalo kaladuwanaanta - badiyaaaba ma muujiyaan bilowga, laakiin dhammaadka isbeddelka iyo dib u noqoshada dhow. Haddii ay jirto fursad lagu xirayo ikhtiyaarka kahor jadwalka, way fiicantahay in la sameeyo. Aad ayey u adag tahay in la arko faraqa bilowga!
Ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah ee soo socda ee u baahan fiiro gaar ah waxay noqon doonaan dhowr sare ama hoose oo khadka ADX ah. Marka laga eego aragtida xaalada suuqa, tani waxay ka dhigan tahay in iibsadayaasha ama iibiyeyaashu ay isku dayayaan inay xaalada u rogaan dhanka ay ka rabaan taasna waxaa lagu arki karaa jaantuska iyada oo ay soo baxayaan qiimo fiiqan oo leh xawilaado badan. Sare sare waxay muujinayaan sii socoshada iyo "diidmada weerarka", kuwa hoose waxay muujinayaan daciifinta dhaqdhaqaaqa iyo bilowga macaashka go'an.
ADX, waxay ku dhacdaa qaybta tilmaamayaasha dib u dhaca aadka u sarreeya. Haddii aad falanqeyso xuduudaha si faahfaahsan, waxaad arki kartaa in habka xisaabinta, xogta laba jeer ay siman tahay celceliska socodka. Haa, tani waxay ka saareysaa inta badan suuqa "buuqa" laakiin isla markaa waxay yareynaysaa xasaasiyadda waqtiga hoose waxayna u baahan tahay inay u gudubto H1 iyo wixii ka sarreeya si loo keeno boqolkiiba calaamadaha faa'iidada leh ee xulashooyinka ikhtiyaariga ah ee la doonayo 65-75% .
Dib u dhacu wuxuu si gaar ah u xoog badan yahay marka laga baxayo guri dheer, marka ugu yaraan 10-15% ee isbeddelku horay u soo maray ka hor inta uusan bilaaban isgoyska khadadka +/- DI. Halkan, in ka badan abid, xaqiijin dheeri ah oo laga helo tilmaamayaasha kanaalka iyo xogta laga helayo isbeddellada ku kordha / hoos u dhaca mugga waa muhiim.
Soo koob . Tilmaamaha ADX waxaa lagula talinayaa ganacsatada doorbidaya xulashooyin dhexdhexaad ah iyo kuwa muddo-dheer ah. Had iyo jeer kama jawaab celiso si ku habboon isbeddellada suuqa ee fiiqan, tixgeliso tan xisaabtanka falanqaynta sida calaamadaha u shaqeeyaan ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah.
Inkasta oo tusaalaha kor ku xusan uu muujinayo heshiisyada muddada-gaaban ee M15-ka aaney inta badan muuqan oo kuwa bilowga ah ay tahay inay soo galaan suuqa oo keliya ka dib markii la xoojiyo guri (muddo) - waxaad u baahan tahay inaad hubiso in dhaqdhaqaaqa dhinaca ee tilmaamayaasha kanaalku dhammaado, markaa fursadaha korodhka macaashka.